GLOXINIA SHAHANE: SHARAXAAD KA MUUQATA MUUQAALKA GEEDKA, MUUQAALADA DHALASHADA, SAWIRKII UBAXA, DARYEEL HABBOON IYO NOOCYO - GURI, GURI
Wakiilka dhirta ugu fiican waa Gloxinia Shagane. Ubax ka kaas oo aan u fiirsan!
Mid ka mid ah wakiillada ugu quruxda badan ee adduunka ubaxa waa Gloxinia Shagane. Waxay soo jiidataa iyada fiiro leh midabada dhalaalaya oo aan caadi ahayn.
Qurxintaan guduudan waa mid aad u jecel beeraha ubaxa, kuwaas oo aan ka baqeynin dhibaatooyinka soo koraya ubaxyo xamaasad leh. Maqaalka waxaad ka baran doontaa sifooyinka ubaxkan quruxda badan iyo xeerarka daryeesha.
Waxaan sidoo kale ka sheekeyn doonaa hababka soo saarida, cudurada iyo cayayaanka. Ka fikir dhirta kale sida iyada. Waxaadna daawan kartaa fiidiyo fiidiyo leh oo xiiso leh midaan.
Qeexitaanka Botanical iyo taariikhda
Shagane - terry Gloxinia oo leh ubaxyo waaweyn oo waawayn ayaa waxaa bixiyay E. Slyusar. Tani waa tigrin midab leh oo cufan leh oo leh corollas leh qoynta cagaaran oo lagu qurxiyo xadka xiiran oo buluug ah. Petals waa midab caag ah oo lagu daboolay dhar guduud ah oo kala duwan iyo xajmiga. Akhri noocyada kale ee gloxinia caddaan ah halkan.
In dabiiciga ah, waxaa jira 25 nooc oo gloxinia ah, laakiin waxaa jira sidoo kale noocyada hybrid (noocyada gloxinia hybrid iyo sida loo iyaga ku korin, waxaa lagu sheegay halkan). Si loo isticmaalo hybrid kaliya laba nooc oo Gloxinia Beautiful iyo Royal. Noocyada hybrid waxay ku xiran tahay xajmiga dhirta:
Noocyada ugu caansan waa:
Isku darka Tigrin.
Gloxinia etyle de feu.
Rua de Rouge
Georgia iyo kuwa kale.
Adiga, waxaan diyaarinay macluumaad ku saabsan noocyada kale ee gloxinia. Baro sida ay u eg tahay iyo sida loo koro Gloxinia Sonata, Kaiser Wilhelm iyo Friedrich, Krasnoyarsk iyo Red Riding Hood, Yesenia, Brokada iyo Tydea Violet.
Qeexida muuqaalka iyo muuqaalada
Shagane waa qoyaan duufaan leh oo leh rhizomes rinjiga iyo dhisto asliga ah. Caleemaha waxay ku yaallaan dhinac kasta oo iskutallaab ah laba caleemo. Maadada saxda ah ee dhif ah waxay leedahay 3 qaybood. Sare iyo caleemaha si buuxda ayaa loo dhejiyaa ama lafdhabarta.
Ubaxyo buluug ah oo caleemo leh ama midab leh oo leh afar xayawaan. Qaabka ubaxa - jardiinka. Giraanta naatarka ama ma ahan dhammaan.
Gloxinia waxay leedahay tiro badan oo ah miraha yar yar. A corolla tuboolla wuxuu noqon karaa casaan, guduud, caddaan ama bunni.
Eeg sawirro dheeraad ah ee warshad cajiib ah.
Halkee iyo sida loo abuuro?
Waa inay si gaar ah u dhegaysato doorashada ee digriiga. Waa in aysan aheyn kuwa la jeexjeexo loona gooyo.
Waa muhiim: Bloomku wuxuu ku xiran yahay cabbirka digriiga. The weyn tuber, xoog leh ubax. Wixii hore u soo baxay sprouts, waxaa fiican in la doorto digriiga leh burooyinkeeda.
Diyaarso ciidda ka hor intaadan beeran.. Xididdada dhirta ayaa aad u dhuuban, sidaa darteed waxay isticmaalaan dhulka dabacsan ee beeritaanka. Dheriga waa in uusan aheyn mid qoto dheer oo ballaaran.
Isku daridda ugu fiican ee dhulka ayaa ka kooban:
Waa inaad sidoo kale raacdaa xeerarka soo degitaanka:
Diyaarso xabbad adag oo hindhis ah.
Si tartiib ah u diirin oo u daadi tuberaha ilaa 30 daqiiqo.
Qaado digriiga oo qalaji.
Beertay si qoto dheer ah 1-2 cm on par leh ciidda ama qoto dheer by badh dhererka tuber ah.
Nalalka iyo meesha
Geedka wuxuu jecel yahay iftiin badan. Prefers ma toosin, laakiin iftiin kala duwan. Kama aadi kartid dhirta qorraxda tooska ah, tanina waxay ka gubi kartaa waxa caleemaha u bilaabmayo curl. Laga soo bilaabo la'aanta iftiinka, dhirta lumiyo midabkiisa, iyo marka marka la eego, koritaanka iyo horumarka ubaxu hoos u dhaco..
Meesha ugu fiican ee galbeedka ama bariga. Haddii aad doorato goobta koonfureed, markaa waxaad u baahan tahay inaad abuurto shoog dheeraad ah, iyo waqooyiga - marka leysku keeno iftiin dheeraad ah.
Waxaa ugu wanaagsan inaad diyaariso carrada naftaada. Waa qasaaro. Dheriga waa inuu ahaadaa mid ballaaran oo qafiif ah. Sare ugu wanaagsan oo dhan dhoobada ama caaga ah.
Sida loo daryeelo?
Gloxinia Shahane waa warshad aad u culus. Sidaa daraadeed, daryeelka guriga waxaad u baahan tahay inaad si taxadar leh u fiirsato oo aad raacdo xeerarka daryeelka.
Nalalka - iftiin iftiin leh. Meesha waa galbeed ama koonfur-galbeed. Haddii loo baahdo, abuur shoog dheeraad ah. Si arrintan loo sameeyo, waxaad ku xiran kartaa daaqadaha farsamada baabuurta ee soo saarta iftiinka iyo waxoogaa yar ayaa ka baxsan. Iska ilaali qoraxda tooska ah.
Waraabinta - isticmaal biyo keliya diiran. U baahanayo waraabin badan oo keliya inta lagu jiro ubax, waraabinta waa la dhimay inta lagu jiro xilliga nasashada.
Mashiinka - dhawr jeer ayaa la qabtay maalintii. Isticmaal biyo diirran.
Diyaarinta hawada - Si looga fogaado istaaga hawada, qolka leh warshadda waa in maalin kasta la qalajiyaa. Haddii kale, joogitaanka hawadu waxay u horseedi doontaa dhacdooyinka cudurada dhirta fangas.
Qoyaan - qoyaan badani waa lagama maarmaan guga. Ha u oggolaanin biyaha inay istaagaan, maadaama qoyaanku ay u nugul yihiin iyaga. Qoyaanka ugu wanaagsan waa 70-80%.
Dharka ugu sareeya - ha codsan wax ka badan laba goor bishii isla markaana isticmaal bacriminta adag ee dhirta gudaha.
Heerkulka - Ka fogow qorshaha iyo dhibcaha heerkulka. Xilliga xagaaga, heerkulka loo baahan yahay waa +20 ... +22 maalintii, iyo habeenkii - illaa +18. Jiilaalka, laga bilaabo +10 ilaa +14.
Sida dhammaan dhirta indoor-ka, gloxinia waxay jiri kartaa jirro ama la soo weeraro cayayaanka.
Anthracnose. Calaamadaha - dhibco caleemaha caleemaha, waxay u baxaan caleemaha iyo jirkooda. Waxay sababi kartaa dhirta iyo burburinta warshadda. ugu dambeyn, waxay keeni kartaa dhimashada geedka. Daawada neefsashada, ku buufin oxyhom, cuproxate ama oxychloride copper. Marxaladda ugu horreysa, qaybaha cudurka qabaa ee geedka waxaa laga saaraa. Iyada oo infekshan xoog leh, dhirta ayaa dhinto.
Asaasiga. Waxa la caddeeyey brown ama casaan leh dhibco buluug cawl on caleemaha. Marka la ogaado, waxaa degdeg ah in laga saaro oo lagu gubo caleemaha cudurka qaba. Daweeyo dhirta leh sulphate copper ama fungicides.
Phyllosticosis. Dhibco mugdi ah ayaa lagu soo koobay wadnaha brown. Waxay ku dhacaan qoyaan badan. Haddii ay dhacdo in phyllossticosis, waa mid deg deg ah in la qalajiyo geedka iyo daaweyn la diyaarinta bakoor ku salaysan.
Septoria. Waxaa jira dhibco miro-bunni ah. Waxay u egyihiin sida ubax. Wixii daaweyn ah isticmaalaya daawooyinka ku saleysan baker iyo fungicides. Waxaa lagama maarmaan ah in la gooyo dhirta laba jeer iyadoo la raacayo toddoba cisho.
Photofluorosis. Mid ka mid ah cudurada ugu xun ee fangas. Waxa loo qaybiyay ciid, biyaha roobka iyo kaydka wasakhaysan ee wasakhaysan.
muuqaalka kore ee brown;
caleemaha qallalan ee cimilada qalalan;
hindhisyada hareeraha ku jira.
Guddi: Daawo cudurka waa mid aan macquul ahayn. Sidaa darteed, waxaa lagama maarmaan ah in la sameeyo ka hortagga. Si arrintan loo sameeyo, samee fangasidaha buufinta.
Qamadi ciriiri. Muujiyey cirifka cirifka leh ee cirridka leh. Sababtoo ah isaga, geedka wuxuu bilaabaa inuu si dhakhso ah u jeexo. Waxay ka muuqataa qoyaan badan, maqnaansho la'aan iyo meel u dhow geedka. Wixii ka hortag, u bixiyaan waraabin dhexdhexaad ah, bixiyaan hawo-qaadasho, iyo qolka hawada. Daaweyn, daaweeyo warshadda leh fungicides.
Macmacaanka macaanka. Cudurka fungal, oo muujiyey ubaxyada arachnid ee midabka cad on geedka. Waxay kobcaysaa sababtoo ah waraabinta xad-dhaafka ah, kala duwanaanta heerkulka, qoyaanka. Marka lagu faafiyo warshad marxaladda hore, daaweynta fungicides waa lagama maarmaan, marxaladda dambe, geedka waa in la burburiyaa.
Qanjiraha Downy. Waxay udhaxeysaa sababtoo ah hoos u dhac kulul, sababtoo ah isticmaalka biyaha roobka. Kuwani waa cirro huruud ah, caleemo madow ama madow oo bunni ah oo caleemo saaran. Daaweyn, geedka waxaa lagu daaweeyaa fungicides.
Thrips. Cayayaanka waxay ku quudiyaan dheecaanka miraha, taas oo keenta dhimashadiisa.. Caabuqa waxaa lagu muujiyaa dhibco dhalaalaya, istaroog iyo dhibco ku yaal caleemaha. Marka la helo, dhirta waa in laga go'o ubaxyo kale oo lagu daweeyo sunta cayayaanka.
Marka dhalmada Shokane ee gloxinia ee guriga joogta waxba ma tarto. Ka fikir dhamaan siyaabaha si faahfaahsan.
Iska yaree xaashida.
Iska yaree jirida xagasha 45 darajo.
Si aad u qallajiso, si aad u dhinto meelaha dillaacsan ee dhuxusha.
Qalabka wax lagu beerto ee carrada ama peat peat 1 cm. Biyaha.
Ku rid weelka geedka ku dhex dar kuleylka. Waraabinta joogtada ah iyo waraabinta.
Ka dib 1.5 illaa 2 bilood, ilmaha ayaa soo bixi doona.
Dhirta yaryar waxay ku fadhiyaan weel gaar ah.
Waxaan kugula talineynaa in aad daawato fiidiyowga ku saabsan taranta gloksinia caleen:
Iska yaree daboolka sare ee leh 2 ilaa 4 jeer.
Ku dar foornada carrada ama peat 1 cm. Si fiican u daadi.
Rooting, saldhigga peduncle waa in lagu daaweeyo leh kobcis dhisidda xididka.
Buds ka hor beerashada waa in laga saaro.
Waxaan kugula talineynaa daawashada fiidiyowga ku saabsan dhalmada Gloxinia by gooyn apical:
Habka ugu dadaal badan iyo waqti-qaadashada ee faafinta ubax - sii kordhaya abuur. Waxay ka kooban tahay kuwan soo socda:
Seeds lagu beeray walxo qoyan oo ah peat iyo ciid.
Konteenarada lagu dhigo aqalka dhirta lagu koriyo.
Marka geedo gaaraan 6-8 cm, waxay ku fadhiisan weelal gaar ah.
Waxaan ku talineynaa daawashada fiidiyowga ku saabsan faafinta gloxinia iyadoo la adeegsanayo abuurka:
Marka sprouts cusub ay bilaabaan inay muuqdaan, digriiga waxaa loo qaybiyaa qaybo leh mindi fiiqan oo nadiif ah. Mid kasta oo iyaga ka mid ah waa in ay ahaataa mid dhibic ah. Qaybaha waxaa lagu baari karaa dhuxul la jajabiyey. Qalabka la qalajiyey oo lagu beeray habka caadiga ah.
Waxaan ku talineynaa inaan daawano fiidiyowga ku saabsan taranta Gloxinia adoo u qaybinaya tuber:
Dhirta oo kale
Violet - wuxuu ka mid yahay caleenta dhirta qoyska Gesnerian. Si kastaba ha ahaatee, Gloxinia, qaybta dhulka hoostiisa ee geedka waa tuber, iyo guduud, nidaamka asalka caadiga ah. Gloxinia xilliga jiilaalka waxay galaan xaalad nasasho ah, caleemaha ayaa sii kordhaya sanadka oo dhan.
Hibiscus - waxay leeyihiin ubax la mid ah qaababka shinnida ama gramophone. Ka baxaa sida gloxinia waxay ku jiri kartaa geeso siman ama la jarjaray.
Achimenez - Ubaxa wuxuu u eg yahay Gloxinia. Petals dhirta waxay noqon kartaa, iyo sidoo kale gloxinia, Terry, oo leh geesaha la xoqay ama si fudud loo soo koobay.
Coleria - Ubaxku wuxuu noqon karaa laba midab oo dhir ah. Cirifka tufaaxu wuxuu noqon karaa mid sahlan oo furan. Wuxuu ka baxaa kadinka kadhaca.
Streptokarpus - wuxuu leeyahay nidaam xidid oo la mid ah gloxinia, waxa kale oo uu leeyahay xididada xididada kala duwan. Ubaxa sidoo kale wuxuu ku jiraa qaab naxdin leh oo leh geeso jilicsan ama jilicsan.
Gloxinia Shahane - dhirta, laakiin aad u qurux badan. Iyada oo daryeel ku habboon, mar walba waxay ku farxaan milkiilaha leh ubax ugu quruxda badan.